News 18 Nepal || ‘हाम्रो निधारमा लगाउने रातो टिकालाइ घृणा गर्यो, देवतालाई ढुङ्गा भन्यो !’
काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक गतिविधिले आम नेपाली जस्तै अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरलाई विचलित बनाएको छ । शुक्रबार साँझ गाली खान्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मनमा लागेको र भोगेको कुरा सार्वजनिक गरेको मानन्धरले बताएकी छन् ।
नेपाल भन्ने देश स्वतन्त्र र स्वर्ग थियो तर नेताले अस्तित्व गुमाउन बाध्य भएको उनको टिप्पणी छ । ‘नेपाल भन्ने एउटा देश थियो जुन स्वतन्त्र थियो, स्वर्ग थियो तर त्यहाका नेताहरुको कारण आफ्नो अस्तित्व गुमाउन बाध्य भयो’, उनले भनेकी छन्, ‘म यो अस्तव्यस्त अवस्थाका कारण यो सोच्न बाध्य भए ! आशा छ हिन्दुहरुलाई यो सब सहन सक्ने साहस भगवान पशुपतिनाथले प्रदान गर्नेछन् ! हर हर माहादेव ।’
पछिल्ला दिनमा क्रिश्चियन संस्कृतिले रातो टीकाको गौरवलाई घृणा गरेको उनको भनाइ छ । भगवनालाई ढुंगा भनेको प्रति उनको आपत्ति छ भने हिन्दु धर्मप्रतिको अपमानप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । डमरू र त्रिशूल किन नेपाली सेनाको चिह्न भन्ने कुरा आएको, आफूहरुको आस्थालाई हटाउने काम सुरु भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।
अभिनेत्री मानन्धरले नेपालको राजनीति २०४६ सालको आन्दोलनपछि सचेत भएको भन्दै त्यो बेलाको एउटा दर्दनाक दृश्यको समेत सम्झना गरेकी छन् । त्यो अवस्थादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दासमेत शान्ति नआएको उनको भनाइ छ । फेरि जनआन्दोलन, छरपष्ट मृत शरीर, दरबार हत्याकाण्डले सबैकुरा विस्तारै बिग्रदै गएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपालीमा समाजमा रहेको भाइचारा र धर्म संस्कृतिको सम्मान ध्वस्त भएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रेगनेन्सी’मा प्रियंका कार्कीको मस्ती, साथिहरुबीच गेटटुगेदर
नम्रताले ‘बिहे नै नगरी बच्चा पाउन मन छ’ भनेपछि..
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यलाई लिएर यसो भन्छन् कलाकार गिरी
‘मेरी बास्सै’की चम्सुरीको दुवै मिर्गौला फेल, अस्पताल भर्ना
अदितीको नजरमा बिहेका लागि यूवकमा हुनुपर्छ यी गुण
सर्वोच्च आदेश पश्चात बोले दीपकराज, दिए यस्तो प्रतिक्रिया
ठकुरी युवतीले दलितसँग विवाह गर्दा शिक्षक दम्पत्तीको उठिबास